Falanqeynta Kulanka Man United Vs Basel, Xaqiiqooyin Ku saabsan Kulankan
Thursday, July 19th, 2018 - 07:03:51
Tuesday September 12, 2017 - 10:01:42 in Wararka by Abdirahman Abduqadir Maankiz
Gegida: Old Trafford
Saacadda Geeska Africa: 9:45 PM
Dhex dhexaadiyaha: Ruddy Buquet
Manchester United ayaa ku soo laabatay koobka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 2015 ka dib markii ay ku soo guuleysteen koobka Europa League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Waxa ay caawa kulankooda furitaanka wareega group-yada Champions League ay wajahayaan kooxda reer Switzerland ee Basel waxa aay sidoo kale Group A kuwada jiraan kooxda reer Portugal ee Benifca iyo kooxda Ruushka ee CSKA Moscow.
Waa markii 21aad ee ay Man United ka qeyb qaadato wareega group-yada ee Champions League, waxaana ay kulankooda furitaanka wajahayaan koxoda Basel oo guul iyo barbaro ka gaartay United wareegii group-yada ee 2011-12.
Mourinho dhiniciisa waxa a bar bar dhac 2-2 toddobaadkan la galeen Stoke horyaalka Premier League-ga.
Kooxda Manchester United waxaa ka maqan oo ganaax ku seegaya kulankaan Phil Jones iyo Eric Bailly waxaase badali doona Chris Smalling iyo Victor Lindelof.
Luke Shaw, Ashley Young iyo Marcos Rojo wey ku soo laabteen tababbarka balse lama hubo in ay qeyb ka noqon doonaan kulankan.
Juan Mata keydka ayuu ku soo bilowday kulankii Stoke balse waa u diyaar kulanka caawa, Halka Marouane Fellaini shaki dhaawac uuku jiro.
Dhanka kooxda martida ah ee Basel waxaa dhaawac cagta ah kaga maqan xiddiga Serey Die.
RAAD RAACA KULANKA?
Kulankaan waa kulankii shanaad ee ay uska horyimaadaan labada kooxood ee Manchester United iyo Basel waxaana ay isku arkeen kaliya Champions League. Ilaa iyo haatan rikoorkooda waa mid isku dheelitiran, koox walba waxa ay soo gaartay hal guul halka labada kulan kale ay barbaro soo galeen.
Basel ayaan laga badinin labadii kulan ee ay Manchester United kula ciyaareen Old Trafford, iyagoo barbaro galay labadii kulan ee ay soo booqdeen 1-1 oo ay galeen bishii March 2003 iyo 3-3 oo ay ku kala baxeen bishii September 2011.
FC Basel ma badin 8dii kulan ee ugu dambeeyey Champions League.